Ningbo SUNPLAST Pipe Co., Ltd sele ugxininisa ukuvelisa inkqubo iHDPE imibhobho iminyaka engaphezu kwama-15. Siye waqalisa ishishini njenge mveliso micro ongambethe ngaphantsi 5 abasebenzi & umgca extrusion enye kuphela umbhobho iHDPE 20-315mm, kodwa ngoku, siye zikhula ukuba mveliso lemveliso ngamazwe mihla ekubeni oomasifundisane ababini & ngaphezulu kwama-100 abasebenzi.
Namhlanje, SUNPLAST iye yaba yenye umenzi eziphambili & umboneleli kwiinkqubo iHDPE imibhobho e China. Ngelo xesha, inkampani iye ofisi intengiso lonke china kunye neemveliso zayo umbhobho iHDPE aye athunyelwa kumazwe angaphezu kwama-20 & iindawo emisaveni hinkwayo.
Sibamkela ngokufudumeleyo abathengi ukusuka kwamanye amazwe ukubuza kuthi, nokwakha ubuhlobo ishishini "win-win" kunye.
SPH800 fracturing lempundu fusion machine iwelding